Mashiinka Diaphragm ee iibka kulul
Bilowga guga, barafku wuxuu ku dhalaalaa buuraha, biyuhu waxay u keenaan nooleynta dabeecadda, laakiin isla mar ahaantaana, waxay faragelisaa shaqada buuraha. Mashiinka 'diaphragm pump' ayaa hadda door muhiim ah ka ciyaara shaqadaas. Bambooyinyada shirkadeena ayaa noqday "xiddig" ...
Fursadaha cusub ee Shiinaha-Latin America
Ganacsiga badeecadaha ee LAC-Shiinaha wuxuu ku dhawaaday inuu xasilloon yahay sanadka 2020. Tani waa mid xusid mudan lafteeda, maadaama LAC GDP uu hoos uga dhacay in kabadan 7 boqolkiiba sanadka 2020 marka loo eego qiyaasaha IMF, lumiyay kobaca tobaneeyo sano. , iyo dhoofinta badeecadaha gobolka ayaa hoos udhacay guud ahaan (Qaramada Midoobay 2021). Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah ganacsiga deggan ...
Xaaladda mashiinka Rock Drill
Labadii sano ee la soo dhaafay, daloolinta dhagaxda ee layliga lugta hawada oo leh saameyn weyn oo saameyn ku leh suuqa ayaa kordhay, iyo dhagaxa dhagaxa ee qeyb ka mid ah tayada sare ee hal qaab leh iyo badhanka yar ee dhexdhexaadka ah ayaa kordhay. Badhanka dhexroorka yar ayaa ah sheyga ugu weyn ee brazing iyo warshadaha qalabka birta ...